Big9 logo ရွှေတစ်ကျပ်သား ၊ Samsung Note 10 ဖုန်းအပြင် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်များစွာအား ကံထူးရယူဖို့Big9 ဖျော်ဖြေရေး ဝန်ဆောင်မှုအား ရယူလိုက်ပါ။
BIG9 New Year Promotion ( 1.9.2019to 31.12.2019 )
၁။ BIG9 မှ မည်ကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုမျိုးရရှိနိုင်မည်နည်း။
ဂီတနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်မျိုးစုံ ဖြစ်တဲ့ သီချင်းများ၊ Live Showများ၊ ဂီတစကားဝိုင်းများ၊ သင်ကြားမှုများ၊ အနုပညာရှင်တို့ရဲ့ နောက်ကွယ်ကလှုပ်ရှားမှုများ၊ ခရီးသွားအစီအစဉ်များအပြင် ဟာသ၊ ပြည်ပရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ၊ မြန်မာ ဇာတ်လမ်းများ အစရှိတဲ့ ကဏ္ဍ အစုံပါဝင်ပြီးအကန့် အသတ်မရှိ ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် ဗီဒီယိုစတိုးတစ်ခုပါ။
၂။ BIG9 ဝန်ဆောင်မှုအားမည်ကဲ့သို့ရယူနိုင်မည်နည်း။
BIG9 ဝန်ဆောင်မှုအားရယူလိုပါကONဟု SMS တွင်ရိုက်ပြီး 8989သို့ စာတို (SMS) ပေးပို့ရပါမည်။
Promotion ကာလအနေဖြင့် ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာ လ (၁) ရက်နေ့မှ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါသည်။
၄။Promotion အစီအစဉ်တွင် မည်သည့်ဆုအမျိုးအစားများပါဝင်မည်နည်း။
Promotion အစီအစဉ်တွင် ရွှေ(၁)ကျပ်သား (၁) ဆု၊ Samsung Note 10 ဖုန်း(၁)လုံး နှင့် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် (၅၀) တို့ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ကံထူးသူများအား မဲဖောက်ရွေးချယ် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါ သည်။
BIG9 NewYearPromotion အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ကံစမ်းသူများသည် BIG9ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူထားရမည်ဖြစ်ပြီးဝန်ဆောင်ခအားအနည်းဆုံး(၇)ကြိမ်အထိပေးေးဆာင်ထားပြီးသူ ဖြစ်ရပါမည်။
ထိုသို့ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူများထဲမှ ကံထူးရှင်များအားမဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ လ( ၇ )ရက်နေ့တွင် ဆုရရှိသူများအားကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူများသည် Promotion ကာလ(၁/၈/၂၀၁၉ - ၃၁/၁၂/၂၀၁၉)အတွင်းဝန်ဆောင်မှုအားပယ်ဖျက်ခြင်းမပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီးထိုသို့ဝန်ဆောင်မှုပယ်ဖျက်ထားသူများအား Promotion ဆုအစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းရွေးချယ်ခြင်းပြုမည်မဟုတ်ပါ။
ဆုရရှိသူများအားဆုလာရောက်ထုတ်ယူရမည့် နေရာနှင့်အချိန်ကိုဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိလာပါက MPT နှင့် BIG9 ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သာအတည်ဖြစ်ပါသည်။
BIG9ဝန်ဆောင်မှုအားပယ်ဖျက်လိုပါက OFF ဟု 8989သို့စာတို (SMS) ပေးပို့ရပါမည်။
၁၀။BIG9 New Year Promotion အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်မေးမြန်းလိုပါကမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
BIG9 New Year Promotion အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်မေးမြန်းလိုပါက BIG9 Facebook Page Chat Box တွင် မေးမြန်းနိုင်သလို Customer Care Hotline Number 09-441122225, 106တို့ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
BIG9New Year Promotion (1.9.2019 to 31.12.2019)
1. What kind of content will you get from BIG9 Service?
It is an entertainment platform for Myanmar people to watch exclusive contents like travel programs, talk shows, interviews, music, MTV, drama series and so many more with unlimited access.
2. How can you subscribe BIG9 service?
To subscribe, send “ON” SMS to 8989.
Promotion period will be on September 1, 2019 and end in December 31, 2019.
- Gold 1 Tical - (1) Pcs
- Samsung Note 10 - (1) phone
- 3000 MPT Topup Cards - (50) Pcs
Customers who want to participate in our BIG9 Promotion will be paid at least (7) times for Service Charge and must be active users when we select the winners.
We will randomly choose the winner among these subscribers on January7th , 2020.
If there would be any complaints about choosing winners, the decision made by MPT and BIG9 will only be confirmed.
To unsubscribe- Please, send “OFF” SMS to 8989.
10. How can you ask details about BIG9 Promotion?
You can ask detailed information at “BIG9 Facebook Page Messenger” or Customer Care Hotline Number (09-441122225, 106).
MPT ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ - BIG9 Service နှစ်သစ်ကူးအစီအစဉ်
ဤစာမျက်နှာသည် နှစ်သစ်ကူး အစီအစဉ် (ပရိုမိုးရှင်း)တွင်ပါဝင်ကံစမ်းသည့်အခါ သင့်အနေဖြင့်လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ပရိုမိုးရှင်းအား မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (“MPT”၊ “ကျွနု်ပ်တို့”၊ “ကျွနု်ပ်တို့ကို”၊ “ကျွနု်ပ်တို့၏”)က ဆောင်ရွက်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ရယူနိုင်ပါသည်။ ပရိုမိုးရှင်းကို Crystal ShineCo., Ltd. က စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ပရိုမိုးရှင်းတွင်ပါဝင်ကံစမ်းခြင်းဖြင့် သင်သည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ နှင့်၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့်အခြားသော သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၊ မူဝါဒများနှင့် စည်းကမ်းချက်များ (စုပေါင်း၍ “စည်းကမ်းချက်များ” ဟုခေါ်ဆိုရန်) ကိုဖတ်ရှုပြီး နားလည်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ စည်းနှောင်မှုကိုခံယူရန် သဘောတူကြောင်း သဘောဆောင်ပါသည်။
စည်းကမ်းချက်များသည် အချိန်အခါမရွေး ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခု ပြုလုပ်ပြီးနောက် ပရိုမိုးရှင်းတွင် သင်၏ဆက်လက်ပါဝင်ကံစမ်းမှုသည် ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သော စည်းကမ်း ချက်များကို သင်က လက်ခံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁.၁ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ပရိုမိုးရှင်းကို Crystal Shine Co., Ltd. က အပြည့်အဝ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီး ပရိုမိုးရှင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းများ သို့မဟုတ် ကိစ္စရပ်များကိုမဆို Crystal Shine Co., Ltd သို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်သင့်ပါသည်။ ပရိုမိုးရှင်း တွင် MPT ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု အတိုင်း အတာသည် အောက်တွင်ထပ်မံရှင်းလင်းဖော်ပြမည့် ကျသင့်ငွေကောက်ခံခြင်း (Billing) နှင့် စာရင်းပေး သုံးစွဲခြင်း (Subscription) ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဖြင့် ကန့်သတ်ထားပါသည်။
၁.၂ စည်းကမ်းချက်များတွင် သင့်အား အတိအလင်း အပ်နှင်းထားခြင်းမရှိသည့် အခွင့်အရေးအားလုံးကို ကျွနု်ပ်တို့က သို့မဟုတ် ကျွနု်ပ်တို့၏ အသုံးပြုခွင့်ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ၊ အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူများနှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများက သီးသန့် ရယူထိန်း သိမ်းထားပါသည်။ သင်အနေဖြင့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် ဥပဒေတွင် ခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းသာ ပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပြီး အခြားသောအသုံးပြုခံစားမှုအားလုံးကို တင်းကျပ်စွာ တားမြစ် ထားပါသည်။
၁.၃ MPT သည် MPT ၏ တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အကြောင်း ပြချက်မရှိဘဲ သင်၏ ပရိုမိုးရှင်းသို့ ဝင်ရောက်မှု သို့မဟုတ် ပါဝင်ကံစမ်းမှုကို အကြောင်းကြားမှုနှင့် တာဝန်မရှိဘဲ အမြဲတမ်းသော်လည်းကောင်း၊ ယာယီသော်လည်းကောင်း ရပ်စဲခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့်ခွင့်ပြုရန်ငြင်းပယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်သည့်အခါတွင် စည်းကမ်းချက်များသည် ဤတွင်ဖော်ပြထားသော ဆက်လက် တည်ရှိနေမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် လိုအပ်သော အတိုင်းအတာအထိ သင်အပေါ် ဆက်လက်စည်းနှောင်မှုရှိရမည်။
၁.၄ ပရိုမိုးရှင်းတွင် သင်၏ပါဝင်ကံစမ်းမှုသည် ကြိုတင်စီစဉ်ထားသောနှင့် ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိ သော ဝန်ဆောင်မှု အဆက်ပြတ်ခြင်းများပေါ် မူတည်နိုင်သည်။ ပရိုမိုးရှင်း၏ အဆက်ပြတ်ခြင်း၊ (စီစဉ်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ စီစဉ်မထားဘဲဖြစ်စေ) ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းသို့မဟုတ် မဝင်ရောက်နိုင် ခြင်းတစ်ခုခုအတွက် MPT သည် သင့်အပေါ် သို့မဟုတ် မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်မဆို တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်သည်ကို သင့်အနေဖြင့် သဘောတူပါသည်။
၁.၅ သင်၏ ပရိုမိုးရှင်းအသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစားပြုမှု၊ သင်၏ အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် မည် သည့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက်မဆို သို့မဟုတ် ပရိုမိုးရှင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင်၏ အခြားဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်မှုတစ်ခုခုအတွက် MPT တွင် တာဝန် မရှိစေရ။
Crystal Shine Co., Ltd. သို့မဟုတ် အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမှ အခြားနည်းဖြင့် တရားသဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ လွဲ၍ သက်ဆိုင်မှုရှိသည့်အတိုင်း ဤ ပရိုမိုးရှင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ရုပ်ပုံများ၊ စာသား၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ သရုပ်ဖော်မှုများ၊ လိုဂိုများ၊ တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှု အမှတ်တံဆိပ်များ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဂီတနှင့် အကြောင်းအရာ အပါအဝင် ၎င်းတို့ချည်းသာ မဟုတ်သော (စုပေါင်း၍ “အကြောင်းအရာ”) MPT ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအချက်အလက် တစ်ခုခုနှင့် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ဉာဏပစ္စည်းအခွင့်အရေးများ အားလုံးမှာ MPT နှင့် ၎င်း၏ အသုံးပြုခွင့်ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ၊ အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူများနှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများ၏ သီးသန့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤတွင်အတိအလင်း ဖော်ပြထားသည်မှလွဲ၍ပရိုမိုးရှင်း၏ မည်သည့်အရာကမျှ ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများတစ်ခုခု တွင်ရှိသော သို့မဟုတ် ထိုအောက်တွင်ရှိသော အသုံးပြုခွင့်တစ်ခု သို့မဟုတ် အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖန်တီးသည်ဟု မမှတ်ယူရ။ Promotion တွင် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက်များ တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုမှ ဆင့်ပွားရရှိလာသော လက်ရာများကို ရောင်းချခြင်း၊ အသုံးပြု ခွင့်ပေးခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ဆင့်ပွားကူးယူခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ လူအများ မြင်သာစေရန် ပြသခြင်း၊ လူအများ မြင်သာစေရန် ဖျော်ဖြေခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ သင့်လျော်သလို ပြင်ဆင်အသုံးပြုခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖန်တီးခြင်းများကို သင့်အနေဖြင့် မပြုလုပ်ရန် သဘောတူပါသည်။ စည်းကမ်းချက်များမှ အတိအလင်း ခွင့်ပြုမထားသော မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို အကြောင်းအရာအားအသုံးပြုခြင်းကို တင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားပါသည်။
၃.၁ ပရိုမိုးရှင်းကာလသည် ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့မှ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ (၃၁) ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါသည်။
၃.၂ ပရိုမိုးရှင်းတွင်ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ရန် သင်အနေဖြင့် BIG9 ဝန်ဆောင်မှု ကို ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း စာရင်းပေးသုံးစွဲရမည်။
၄.၁ ဤပရိုမိုးရှင်းကို အနည်ဆုံး အသက်တစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ်(၁၆)နှစ်နှင့် အထက်ရှိပြီး (MPT SIM အသုံးပြု နေသည့်) မှတ်ပုံတင်ထားသော MPT သုံးစွဲသူများအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။
၄.၂ MPTနှင့်တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မပတ်သက်သည်ဖြစ်စေMPT အတွက်လုပ်ကိုင်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ်MPT၏ ဝန်ထမ်းများ(မိသားစုနှင့်ဆွေမျိုးများ အပါအဝင်)ပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်ကံစမ်းခွင့်မရှိပါ။
၅။ ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း
MPT အနေဖြင့် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်အတွက် လိုအပ်သော သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့် ကျိုးကြောင်း ဆီလျော်စွာ ဆက်စပ်သော ကိစ္စရပ်များအတွက်လည်းကောင်း၊ လူသိများစေရန်ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက် ပါဝင် ကံစမ်းသူများ၏ဗီဒီယိုများ နှင့်/သို့မဟုတ် ရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းအပါအဝင် ဖြစ်သော်လည်းယင်းတို့ ချည်းသာဟု ကန့်သတ်မထားသော MPT ၏ ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဈေး ကွက်ရှာဖွေရန်၊ ကြော်ငြာရန် နှင့်/သို့မဟုတ် အရောင်းမြှင့်တင်ရန် အလို့ငှာပါဝင်ကံစမ်းသူများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ကောက်ခံခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ဖွင့်ဟ ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့အကြား ဝေမျှခြင်းတို့ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် MPT၏ တရားဝင် ခွင့်ပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်သက်ဆိုင်ရာ တတိယပုဂ္ဂိုလ်များထံ ထိုကဲ့သို့သော ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ခြင်းကို ပါဝင်ကံ စမ်းသူများက သဘောတူညီပြီး ခွင့်ပြုပါသည်။
၆။ တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်စေခြင်း
သင်သည် MPT နှင့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ၊ ပူးတွဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ၊ အေးဂျင့်များ၊ မန်နေဂျာများ နှင့် အခြားဆက်စပ်ကုမ္ပဏီများ၊ နှင့် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ အေးဂျင့်များ၊ အရာထမ်းများ၊ ဒါရိုက်တာများအား (၁) သင်ထုတ်လွှတ်လိုက်သော သို့မဟုတ် ရရှိ သောဒေတာ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုအပါအဝင် သင်၏ ပရိုမိုးရှင်းအား အသုံးပြုခြင်း နှင့် ဝင်ရောက်ခြင်း (၂) ဤတွင်ပါဝင်သော ကိုယ်စားပြုတင်ပြခြင်းများနှင့် အာမခံချက်များ တစ်ခုခုကို ချိုးဖောက်ခြင်း အပါအဝင် ယင်းတို့ချည်းသာမဟုတ်သော စည်းကမ်းချက်များ၏ စည်းကမ်းတစ်ခုခု အား ချိုးဖောက်ခြင်း (၃) ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှု အခွင့်အရေး တစ်စုံတစ်ရာ၊ လူတစ်ဦးတစ် ယောက်၏ ကျော်ကြားမှုကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများအား အလွှဲသုံးစားပြုခြင်းကို ကာကွယ်သည့် အခွင့် အရေးများ (Publicity Rights) သို့မဟုတ်၊ ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေး များ အပါအဝင် ၎င်းတို့ ချည်းသာမဟုတ်သော တတိယပုဂ္ဂိုလ်အခွင့်အရေးတစ်ခုခုကို သင့်အနေဖြင့် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ (၄) သင်၏ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်း တစ်ခုခုကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ (၅) ပရိုမိုးရှင်းမှတစ်ဆင့် သင်တင်ပြသော သို့မဟုတ် သင်ရရှိသော အချက်အလက်တစ်ခုခု၏ ရလဒ်တစ်ခုကြောင့် တောင်းဆိုမှု သို့မဟုတ် နစ်နာမှု တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် (၆) သင်၏ဖုန်းနံပါတ်(စာရင်းသွင်းထားသည်ဖြစ်စေ၊ စာရင်းမသွင်း ထားသည်ဖြစ်စေ)၊ ဟန်းဆက်၊ သို့မဟုတ် အခြားသော ကိရိယာမှတဆင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဦး၏ ပရိုမိုးရှင်းသို့ဝင်ရောက်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုတို့မှ ပေါ်ပေါက်လာသော တောင်းဆိုမှုများ၊ နစ်နာမှု များ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ တာဝန်ခံမှုများ၊ ကုန်ကျမှုများ သို့မဟုတ် ကြွေးမြီနှင့် အသုံးစရိတ် များ (ရှေ့နေ့ခများအပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်းသာဟုကန့်သတ်မထားသော) တစ်ခုခု နှင့် အားလုံးထံမှနှင့် ၎င်းတို့ကို ဆန့်ကျင်၍ ကာကွယ်ပေးရန်၊ တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်စေရန်နှင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုမှ ကင်း လွတ်စေရန်သဘောတူပါသည်။
၇။ အာမခံချက်များ၏ မသက်ဆိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းချက်များနှင့် တာဝန်ခံမှုကန့်သတ်ချက်
၇.၁ ပရိုမိုးရှင်းတွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ်ပရိုမိုးရှင်းမှတဆင့်အခြားနည်းဖြင့် သင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲအပါအဝင်)နှင့် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကို ဤနေရာ၌ “ရှိသည့်အတိုင်း” နှင့် “ရှိနိုင် မည့်အတိုင်း” ရနိုင်သောစနစ်ဖြင့်ပံ့ပိုးခြင်းဖြစ်သည်။ MPT သည်ပရိုမိုးရှင်းလည်ပတ်ခြင်း သို့မ ဟုတ် ပရိုမိုးရှင်းတွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ်ပရိုမိုးရှင်းမှတဆင့် အခြားနည်းဖြင့်သင်အသုံး ပြု နိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသော ၎င်း၏တိကျမှုအပါအဝင်သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက် အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မဟုတ် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို မည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုဖြစ်သော အတိအလင်းဖြစ်စေ၊ တိုက်ရိုက် မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ်စားပြု တင်ပြခြင်းများ သို့မဟုတ် အာမခံချက်များမပြုလုပ်ပါ။ သင်၏ ပရိုမိုးရှင်းအသုံးပြုမှုသည် ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်ကို မိမိဘာသာ တာဝန်ယူသည်ဟု အတိအလင်း သဘောတူပါသည်။
၇.၂ MPT သည်ပရိုမိုးရှင်းအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်သော သို့မဟုတ် ပရိုမိုးရှင်းမှတဆင့်အခြားနည်းဖြင့် သင်အသုံးပြုနိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသော သတင်း အချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မဟုတ် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများမှ ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုဖြစ်သည့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်သော၊ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော၊ ဆက်စပ်၍ဖြစ်သော၊ ပြစ်ဒဏ်အရဖြစ်သော နှင့်/သို့မဟုတ် အကျိုးဆက် အားဖြင့်ဖြစ်သော နစ်နာမှုများ အပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်းသာဟု ကန့်သတ်မထားသော နစ်နာမှုတစ်စုံ တစ်ရာအတွက် တာဝန်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
၇.၃ သင်အနေဖြင့်ပရိုမိုးရှင်းသို့ ဝင်ရောက်ကံစမ်းရာတွင်မည်သည့်အကြောင်းအရင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ပရိုမိုးရှင်းနှင့်ဆက်စပ်၍ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ အကျိုးဆက်အရဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာသော မည်သည့် သဘောသဘာဝ သို့မဟုတ် အမျိုးအစားမဆိုရှိသည့် ဆုံးရှုံးမှု၊ ထိခိုက်အနာတရဖြစ်မှု၊ ထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် ပေးရန်တာဝန်ရှိမှုနှင့် အကျိုးဆက်များ တစ်ခုခုနှင့်အားလုံးမှ သော်လည်းကောင်း၊ MPT ကိုထိုသို့ဖြစ်နိုင်ခြေအား အသိပေးပြီးသည့်တိုင်ပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်ကံစမ်းစဉ်အတွင်း သို့မဟုတ် ကံထူးဆုအား အသုံးပြုခံစားခြင်းမှ ပေါ်ပေါက်လာသော သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်သော မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်မဆို ထိခိုက်အနာတရဖြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ရပ်ရပ်အပေါ် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ထိခိုက်မှုတစ်ရပ်ရပ် အပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်းသာဟု မကန့်သတ်လျက်၎င်းတို့မှသော်လည်းကောင်း ပေါ်ပေါက်လာသောနှင့် ၎င်းတို့ကိုအကြောင်းပြုသော တောင်းခံမှု များ၊ တောင်းဆိုမှုများ၊ အခွင့်အရေးများ၊ တရားစွဲဆိုရန် အကြောင်းတို့မှ MPT အားကင်းလွတ်စေရန်နှင့် ရာသက်ပန် လွတ်ငြိမ်းစေရန် သဘော တူညီပါသည်။
၇.၄ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများမှ ခွင့်ပြုနိုင်သည့် အများဆုံးအတိုင်းအတာအလျောက် MPT သည် ရည်ရွယ် ချက်တစ်ခုအတွက် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရောင်းချနိုင်စွမ်း၏ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အာမခံချက်များ အပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်းယင်းတို့ချည်းသာဟုကန့်သတ်မထားသောအတိအလင်းဖော်ပြထားသည့်သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်မဟုတ်သည့် အာမခံချက်များအားလုံးကို မသက်ဆိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုပါသည်။
၇.၅ ပရိုမိုးရှင်းတွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ်ပရိုမိုးရှင်းမှတဆင့်အခြားနည်းဖြင့် သင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မဟုတ် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများတွင် MPT ဆာဗာများ သို့မဟုတ် MPT မှ ပို့သောအီလက်ထရောက်နစ် ဆက်သွယ်မှုများသည် ဗိုင်းရပ်များ သို့မဟုတ် အခြားသော အန္တရာယ်ရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများမှ ကင်းလွတ်ပါသည်ဟု MPT က အာမခံခြင်း မပြုပါ။
၈။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြောင်းအရာ
ပရိုမိုးရှင်းတွင် Crystal Shine Co., Ltd. အပါအဝင် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှ ရရှိသော သို့မဟုတ် ၎င်းတို့က ပံ့ပိုးပေး ထားသောအကြောင်းအရာ(တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြောင်းအရာ)တို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍အဆိုပါတတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းအရာသို့မဟုတ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ်သောချိတ်ဆက်ထားသည့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုခုအတွက် MPTတွင်တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သတင်းအချက်အလက်၊ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ တစ်ခုခုအား ရည်ညွှန်းချက်သည် MPT က ထောက်ခံမှု၊ ကမကထပြုမှု သို့မဟုတ် အကြံပြုမှု မဟုတ်ပါ သို့မဟုတ် ထိုသို့သွယ်ဝိုက်ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
၉.၁ တတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် သက်ဆိုင်မှုရှိလျှင် ကံထူးဆုများ အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါမည်။
၉.၂ စည်းကမ်းချက်များသည် http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/တွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည့် MPT ၏ အထွေထွေစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ (“GTC”) အရဖြစ်ရပါမည်။ ဤစည်းကမ်းချက်၏ စည်းကမ်းများနှင့် GTC အကြား ပဋိပက္ခတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ဤစည်း ကမ်းချက်များ၏ စည်းကမ်းများက လွှမ်းမိုးရမည်။
၉.၃ စည်းကမ်းချက်များသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများ နှင့် တရားရုံး သို့မ ဟုတ် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော အဖွဲ့တစ်ခုမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် စည်းမျဉ်း၊ အမိန့် ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြား ချက် သို့မဟုတ် လမ်းညွှန်ချက် တစ်ခုခုအရဖြစ်ရပါမည်။
၉.၄ အကယ်၍ စည်းကမ်းချက်များ သို့မဟုတ် ၎င်းအကျုံးဝင်မှု၏ စည်းကမ်းများ ပဋိညာဉ်ပြုချက်၊ ပြဋ္ဌာန်း ချက်တစ်ခုခုအား တရားရုံးတစ်ခုခု သို့မဟုတ် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောအဖွဲ့တစ်ခုခု သို့မဟုတ် ထို အကြောင်းအရာ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်မှ ဥပဒေနှင့် မကိုက်ညီခြင်း၊ တရားမဝင်ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အာဏာမသက်ရောက်နိုင်ခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါက စည်းကမ်းချက်များ၏ ကျန်ရှိသော အပိုင်း သို့မဟုတ် အဆိုပါ စည်းကမ်းများ၊ ပဋိညာဉ်ပြုချက် သို့မဟုတ် ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ (တရားမဝင် ဖြစ်ကြောင်း သို့မဟုတ် အာဏာသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်း သတ်မှတ်ထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များမှအပ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးနှင့် သက်ဆိုင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိစေရဘဲ စည်းကမ်းချက်များ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်စီသည် ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသော အများဆုံး အတိုင်းအတာအထိ တရားဝင်ဖြစ်ပြီး အာဏာ သက်ရောက်မှု ဆက်လက်ရှိရမည်။
BIG9 နှစ်သစ်ကူးအစီအစဉ်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ
၁။ အသုံးပြုသူသည် BIG9 ဝန်ဆောင်မှုကို MPTဖုန်းနံပတ်များအသုံးပြု၍ ဝန်ဆောင်မှု ရယူထားရမည်ဖြစ်သည်။
၂။ မှတ်ပုံတင်ထားသောMPTအသုံးပြုသူများ (MPT ဆင်းမ်ကဒ်အသုံးပြုသူ)၊ အနည်းဆုံး အသက် တစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ်ပြည့်ပြီးသောမြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် BIG9 ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူထားသောသူများ(အသစ်/အဟောင်း)သည်ဤအထူးအစီအစဉ် တွင်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
၃။ အသုံးပြုသည် ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုအား အနည်းဆုံး(၇)ကြိမ် အောင်မြင်စွာ ပေးချေထားရမည် ဖြစ်ပြီး ဆုရွေးချယ်သည့် အချိန်တွင် ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ရမည်။
၄။ ပရိုမိုးရှင်းကာလသည် ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့မှ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ (၃၁) ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပြီး ပရိုမိုးရှင်းကာလဖြစ်သည်။
၅။ ကံထူးရှင်များအား ပရိုမိုးရှင်းကာလ ပြီးဆုံးသောအခါ မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဆုများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
- ရွှေ (၁) ကျပ်သားဆု (၁) ဆု
- Samsung Note 10 ဖုန်း (၁) လုံး
- MPT ငွေဖြည့်ကဒ်(၃၀၀၀) ကျပ်တန် (၅၀) ဆု
၆။ ကံထူးသူများအား ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလ (၇) ရက်နေ့တွင် ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၇။ MPT နှင့်တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မပတ်သက်သည်ဖြစ်စေ MPTအတွက် လုပ်ကိုင်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် မိသားစုနှင့်ဆွေမျိုးများအပါအဝင် MPT၏ ဝန်ထမ်းများ ပရိုမိုးရှင်း တွင်ပါဝင်ကံစမ်းခွင့်မရှိပါ။
၈။ ဆုကိုလာရောက်ထုတ်ယူရန်၊ သက်ဆိုင်ရာကြေငြာမှုပြုလုပ်သောနေ့ရက်မှစ၍ တစ်လ အတွင်း မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်လူကိုယ်တိုင် MPT ရုံးချုပ်သို့ လာရောက်ထုတ်ယူရပါမည်။ အဆိုပါ လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိလျှင်ဆုကိုအခြားအကျုံးဝင်သင့်လျော်သောပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူကို ပေးအပ်မည် ဖြစ်သည်။
၉။ ဆုအမျိုးအစားများနှင့်ကံစမ်းမဲပေါက်သူများကိုရွေးချယ်ရန်အပါအဝင်ပရိုမိုးရှင်းနှင့်ပတ်သတ် သောမည်သည့်အခြေအနေကိုမဆို BIG9Co., Ltd. နှင့် MPT တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကသာနောက်ဆုံးအတည်ဖြစ်သည်။နောက်ထပ်တောင်းဆိုမှုများ၊စုံစမ်းမှုများနှင့်အပေးအယူများကိုပြုလုပ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။
၁၀။ ပရိုမိုးရှင်း နှင့်ပတ်သတ်၍အသေးစိတ်သိရှိလိုလျှင်၀၉ - ၄၄၁၁၂၂၂၂၅သို့မဟုတ်၁၀၆ သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
MPT Terms and Conditions –BIG9 Service New Year Promotion
This page explains the terms by which you agree to abide by when participating in the “New Year Promotion” (“Promotion”). The Promotion can be accessed through services provided by Myanmar Posts and Telecommunications (“MPT”, “we”, “us”, “our”). The Promotion is operated by and provided to you by Contents Hub Co.,Ltd. By participating in the Promotion, you signify that you have read, understood, and agree to be bound by these Terms and Conditions and any other applicable rules, policies and terms associated therewith (collectively, the “Terms”).
1.1 As mentioned above, the Promotion is fully operated by Crystal Shine Co.,Ltd. The scope of MPT’s involvement with the Promotion is limited to billing and subscription functions only, which will be further explained below.
1.2 All rights not expressly granted to you in the Terms are reserved and retained by us or our licensors, suppliers, publishers, rights holders, or other content providers. You may participate in the Promotion only as permitted by the Terms and by law; all other uses are strictly prohibited.
1.3 MPT may permanently or temporarily terminate, suspend, or otherwise refuse to permit your access or participation in the Promotion as determined in MPT’s sole discretion, without notice and liability for any or no reason. In such event, you shall continue to be bound by the Terms to the extent necessary to fulfill surviving terms contained herein.
1.4 Your participation in the Promotion is subject to scheduled and unscheduled service interruptions. You agree that MPT will not be liable to you or any third parties for any interruption of the Promotion, downtime (planned or unplanned) or access failure.
Except as otherwise rightfully operated by Crystal Shine Co.,Ltd.or any other third party, as applicable, any MPT proprietary material related to the Promotion, including, without limitation, software, images, text, graphics, illustrations, logos, patents, trademarks, service marks, copyrights, photographs, audio, videos, music, and content (collectively, “Content”), and all intellectual property rights related thereto, are the exclusive property of MPT and its licensors, suppliers, publishers, rights holders, or other content providers. Except as explicitly provided herein, nothing in the Terms shall be deemed to createalicense or right in or under any such intellectual property rights, and you agree not to sell, license, rent, modify, distribute, copy, reproduce, reverse engineer, transmit, publicly display, publicly perform, publish, adapt, edit or create derivative works from any materials or Content accessible on the Promotion. Use of the Content for any purpose not expressly permitted by the Terms is strictly prohibited.
3.1 The Promotion period is from 1st September 2019 to 31st December 2019 (“Promotion Period”).
3.2 In order to participate in the Promotion, you must subscribe to the BIG9 service during the Promotion Period.
4.1 The Promotion is intended solely for select MPT registered users (usingaMPT SIM) who are at least sixteen (16) years of age.
The participants agree and consent to MPT collecting, using, disclosing and sharing amongst themselves the Participants’ personal data, and disclosing such personal data to MPT’s authorized service providers and relevant third parties for purposes which are necessary or reasonably incidental to the Promotion, and to market, advertise and/or promote the goods or services of MPT, including without limitation using videos and/or images of the Participants for publicity purposes.
7.1 THE PROMOTION AND ALL INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) AND OTHER SERVICES INCLUDED IN OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THEREIN ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS. MPT MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF THE PROMOTION, OR THE INFORMATION, INCLUDING ITS ACCURACY, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) OR OTHER SERVICES INCLUDED IN OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THROUGH THE PROMOTION. YOU EXPRESSLY AGREE THAT YOUR USE OF THE PROMOTION IS AT YOUR SOLE RISK.
7.4 TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY APPLICABLE LAW, MPT DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
The Promotion may aggregate content obtained or provided by third parties, including Crystal Shine Co.,Ltd. (“Third Party Content”). As such, MPT is not responsible for such Third Party Content or any linked websites associated with Third Party Content. Reference to any information, products or services of third parties does not constitute or imply endorsement, sponsorship or recommendation by MPT.
BIG9 New Year Promotion Terms and Conditions
1. Users can subscribe to the BIG9service using their MPT phone numbers.
2. MPT registered users (using an MPT SIM) who are Myanmar citizens, at least 16 years old, and are BIG9 subscribers (new/existing) can participate in the Promotion.
3. To be eligible, users have to successfully pay for the service at least7times within Promotion Period and must be an active user at the time of winner selection.
4. The Promotion period is from 1th September 2019 to 31 th December 2019 (“Promotion Period”).
5. Winners will be selected randomly by lucky draw at the end of the Promotion Period. The prizes are as follows:
• Gold 1 Tical (1pc)
• Samsung Note 10 Phone (1)
• 3,000Ks MPT Top-up Card (50pcs)
6. Winners will be announcing on7January 2020.
7.Any individual or organization working directly or indirectly with MPT including their family and relatives are not eligible for the lucky draw.
8. To collect their prize, eligible winners must personally present their original NRC Card at the MPT head office within one month from the relevant announcement date. Failure to comply with this requirement may result to awarding of the prize to another eligible participant.
9. Crystal Shine Co. Ltd and MPT’s decision in relation to every aspect of the Promotion including but not limited to the type of Prize and the selection of winner shall be deemed final and conclusive under any circumstance. No further appeal, enquiry and/or correspondence will be entertained.
10. You may contact 09441122225 and 106 for detailed information about the Promotion.